प्रचण्डको खतरनाक मास्टरप्लानको पर्दाफास -पूरा हेरेर शेयर गर्नुहोस – PathivaraOnline
Home > समाचार > प्रचण्डको खतरनाक मास्टरप्लानको पर्दाफास -पूरा हेरेर शेयर गर्नुहोस
काठमाडौं। पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा रामवीर मानन्धर निकै चर्चामा छन् । काठमाडौं ७ बाट प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद मानन्धर सोही चुनावमा बर्दियाबाट हारेका नेता बामदेव गौतमलाई सांसद बनाउन आफ्नो पद नै बलिदान गर्न तयार भएपछि हटकेक बनेका छन् । रामवीरले काठमाडौं ७ को सांसदबाट राजीनामा दिने व्यहोराको पत्र पार्टी अध्यक्षलाई बुझाइसकेका छन् । उनले राजीनामा दिएसँगै रिक्त हुने सांसद पदपुर्ति गर्न नियमअनुसार त्यहाँ उपनिर्वाचन हुन्छ । सो उपनिर्वाचनमा बामदेव गौतम उम्मेदवार भएर जिती सांसद बन्ने दाउमा छन् ।
सतही चर्चामा रामवीर र बामदेव छन् तर यी दुवैलाई चलाउने रिमोट भने नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड भएको खुलेको छ । असोज २२ गते बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकमा रामवीरको पत्र पार्टीका १ नम्बर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई २ नम्बर अध्यक्ष प्रचण्डले थमाएपछि नै यो खेलका सूत्रधार प्रचण्ड भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । त्यसमाथि यो पत्र प्रचण्ड निवास खुमलटारमा सचिवालय बैठकभन्दा ठिक अघिल्लो रात तयार भएको खुमलटार स्रोत बताउँछ । प्रचण्डले रामवीर र बामदेवलाई ललिपप देखाइरहेका छन् । उनीहरु पनि प्रचण्डको आश्वासनमा मख्ख परेर उनले भनेझैं गर्दैछन् । उता प्रचण्ड भने यी दुईलाई गोटी बनाउँदै शक्ति हत्याउने दाउमा छन् ।
प्रचण्ड खुला राजनीतिमा आएपछि नै शक्तिकेन्द्रको रुपमा स्थापित छन् । सत्तामा भए पनि नभए पनि उनी सत्ताको समीकरण उल्ट्याउने क्षमता भएका नेताका रुपमा रहे । पछिल्लो समय एमालेसँग एकीकरण गरी नयाँ पार्टी नेकपा गठन भएपछि भने उनी छायामा परेका छन् । अहिले प्रचण्डसँग न सत्ताको बागडोर छ न पार्टीको । पार्टी एकीकरणका बेला एकले पार्टीको नेतृत्व र अर्कोले सरकारको नेतृत्व लिने गरी ओली र प्रचण्डले शक्ति बाँडफाँड गर्ने चर्चा चलेपनि त्यसो भएन । अहिले सरकार र पार्टी दुवैको नेतृत्व प्रधानमन्त्री ओलीले गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको अहिलेको कार्यशैली हेर्दा उनी अर्को निर्वाचनसम्म पार्टी र सरकार दुवैको नेतृत्व छोड्नेवाला छैनन् । यस्तोमा आफूले यी दुवै शक्ति हात पार्न प्रचण्ड पार्टीभित्रै खेलिरहेका छन् ।
प्रचण्डले रामवीर र बामदेवलाई ललिपप देखाइरहेका छन् । उनीहरु पनि प्रचण्डको आश्वासनमा मख्ख परेर उनले भनेझैं गर्दैछन् । उता प्रचण्ड भने यी दुईलाई गोटी बनाउँदै शक्ति हत्याउने दाउमा छन् ।बामदेव सांसद बन्न लालायित छन् । तत्कालीन एमालेका सिनियर नेता बामदेव भावी प्रधानमन्त्रीका समेत दावेदार थिए । तर, बाम गठबन्धनको देशैभरी प्रचण्ड बहुमत आउँदा बामदेव चिप्लिए । बाम गठबन्धनका न्यून प्रभाव भएका र आलाकाँचा उम्मेदवारले समेत चुनाव जित्दा प्रभावशाली र सिनियर बामदेवले नै चुनाव हारे । यो चोट उनलाई असह्य भएको छ । उनी लामो समयदेखि नै उपनिर्वाचनबाट भए पनि सांसद बन्न चाहन्छन् । यसका लागि उनले झलनाथ खनाल वा माधव नेपालमध्ये एकलाई राष्ट्रपनि बनाएर त्यो ठाउँबाट उपनिर्वाचनमार्फत सांसद बन्ने प्रयास पनि नगरेका होइनन् । तर ती सबै प्रयास सफल नभएपछि उनी प्रचण्डसँग नजिकिएर रामवीरलाई राजीनामा गराउने र सांसद बन्ने आशामा छन् ।
रामवीर पनि प्रधानमन्त्री ओलीसँग असन्तुष्ट छन् । रामवीरले काठमाडौं ७ बाट अहिले दोस्रो पटक चुनाव जितेका हुन् । लगातार दुई पटक चुनाव जितेपछि रामवीरले मन्त्री पाउने आशा गरेका थिए । तर, उनले मन्त्री त के राज्यमन्त्री पनि पाएनन् । रामवीर ओलीसँग खिन्न त थिए तर उनको आक्रोश त्यतिबेला बढ्यो जब उनले पार्टीमा आफूभन्दा जुनियर ठानेका नेतालाई अध्यक्ष ओलीले उनीभन्दा सिनियर बनाइदिए । रामवीरले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा २ पटक जितिसकेका थिए । उनकै क्षेत्रबाट बसन्त मानन्धरले प्रदेशसभामा चुनाव जितेका थिए । आफू प्रतिनिधिसभा र बसन्त प्रदेशसभा सांसद भएकोले पनि रामवीरले बसन्तलाई आफूभन्दा जुनियर ठान्थे । तर, अध्यक्ष ओलीले बसन्तलाई केन्द्रीय सदस्य बनाए रामवीर परेनन् ।
सार्वजनिक रुपमै रामवीरले भन्न थाले ‘ओलीको काम छैन, ओलीबाट केही हुँदैन ।’ रामवीरले पत्रकार सम्मेलनका बेला चुरो कुरो फुत्काइहाले ‘ओलीलाई हटाएर बामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ ।’केन्द्रीय सदस्य नै नपाएपनि रामवीरको अध्यक्ष ओलीप्रतिको आक्रोश चुलियो । यद्यपि यति बेलासम्म उनलाई आशा थियो – अध्यक्षले संसदीय समितिको सभापति भए पनि बनाउलान् । तर, यो आशा पनि निराशामा बदलियो, रामवीरले संसदीय समितिको सभापति पनि पाएनन् । त्यसपछि भने रामवीर प्रधानमन्त्रीको खुला आलोचक बने । सार्वजनिक रुपमै रामवीरले भन्न थाले ‘ओलीको काम छैन, ओलीबाट केही हुँदैन ।’ यो आलोचना पार्टीका एक सदस्यको नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टिको रुपमा लिन सकिन्थ्यो । तर, रामवीरले पत्रकार सम्मेलनका बेला चुरो कुरो फुत्काइहाले ‘ओलीलाई हटाएर बामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ ।’
रामवीरले बामदेवको नामै लिएपछि भने पार्टीभित्र रामवीर कसरी प्रयोग हुँदैछन् भन्ने प्रस्ट भयो । किनकि बामदेव सांसद नै होइनन् । सांसद नभएको व्यक्ति मन्त्री त बन्न सक्छ तर प्रधानमन्त्री बन्न सक्दैन । मन्त्री बन्नको लागि पनि उसले मन्त्री भएको ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्य बन्नै पर्छ । त्यसमाथि बामदेव त मौजुदा प्रतिनिधिसभा चुनाव हारेका व्यक्ति हुन् । संविधानमा प्रस्ट लेखिएको छ मौजुदा प्रतिनिधिसभा चुनाव हारेको व्यक्ति मन्त्री बन्न पाउँदेन । बामदेव कसरी प्रधानमन्त्री हुन सक्छन् ? यसको लागि उपनिर्वाचन हुनुपर्छ र बामदेवले त्यो उपनिर्वाचन जित्नुपर्छ । उपनिर्वाचन कहाँ हुने ? पार्टीभित्रकाले पत्तो पाइहाले – जसले यो सब बोलेको छ उसैले ठाउँ छोडिदिने । लगत्ते रामवीर आफैंले भने मैले राजीनामा दिन्छु ।
प्रचण्डले आफूलाई केन्द्रीय सदस्य, मन्त्री र राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने आश्वासन दिएको रामवीर आफैंले भनेपछि पार्टीभित्र खैलाबैला मच्चियो ।रामवीरको अध्यक्ष ओलीप्रतिको असन्तुष्टि र बामदेवको सांसद बन्ने लालसाका बीचमा प्रचण्डले आफ्नो शक्तिमा पुग्ने सपना सार्थक हुने बाटो भेट्टाए । त्यसपछि प्रचण्डले यी दुईलाई गोटीका रुपमा प्रयोग गर्न थाले । प्रचण्डले आफूलाई केन्द्रीय सदस्य, मन्त्री र राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने आश्वासन दिएको रामवीर आफैंले भनेपछि पार्टीभित्र खैलाबैला मच्चियो । ओलीबाट आशा गरेका कुरा प्रचण्डले दिने आश्वासन दिएपछि रामवीर प्रचण्डको इशारामा राजीनामा दिन तयार भए । उता बामदेव पनि प्रचण्डको पहलमा आफू सांसद बन्ने बाटो खुलेपछि प्रचण्डसँग नजिकिन तयार भए । हुन त बामदेव पहिल्यैदेखि प्रचण्डलाई साथ दिने व्यक्ति हुन् । प्रचण्डको पहिलो प्रधानमन्त्रीकालमा भएको कटवाल काण्डमा पार्टीले सरकारको समर्थन फिर्ता लिँदा समेत बामदेवले अन्तिम समयसम्म प्रचण्डलाई समर्थन गरेका थिए ।
प्रचण्डले पार्टीभित्र ओलीप्रति असन्तुष्टिको माहोल तयार गर्दैछन् । ओलीनिकट रामवीरलाई आफूनिकट तानेसँगै प्रचण्डले एमालेको नवौं महाधिवेशनमा ओलीसाई आँखा चिम्लेर साथ दिएका बामदेवलाई समेत आफ्नो टिममा ल्याइसके । अहिले प्रचण्डले भनेकै भरमा प्रधानमन्त्रीले उनको कुरा मान्दैनन् । प्रधानमन्त्री ओली प्रचण्डका कुरासमेत बाइपास गरेर अगाडि बढिरहेका छन् जसका कारण प्रचण्ड भित्रभित्रै रुष्ट छन् । पार्टीभित्र असन्तुष्टिको माहोल तयार गरेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई ट्रयापमा नपार्दासम्म उनले न प्रधानमन्त्री पद छोड्छन् न पार्टीको एक नम्बर अध्यक्ष । यही कारण ओलीलाई चेपुवामा पारेर प्रधानमन्त्री पद छोड्न बाध्य पार्ने प्रचण्डको दाउ छ ।
पार्टीभित्र असन्तुष्टिको माहोल तयार गरेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई ट्रयापमा नपार्दासम्म उनले न प्रधानमन्त्री पद छोड्छन् न पार्टीको एक नम्बर अध्यक्ष । यही कारण ओलीलाई चेपुवामा पारेर प्रधानमन्त्री पद छोड्न बाध्य पार्ने प्रचण्डको दाउ छ ।अहिलेको स्थिति हेर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री पद त कुनै पनि हालतमा छोड्दैनन् । यो कुरा प्रचण्डलाई पनि थाहा छ । तर, पार्टीभित्र प्रचण्डबाहेक अर्को विकल्प (तत्कालीन एमाले भित्रबाट) पाए ओलीले केही सहज रुपमा पद छोड्न सक्छन् । यो कुरा बुझेका प्रचण्डले बामदेवलाई दोस्रो विकल्पको रुपमा तयार पार्दैछन् । ओलीलाई चेपुवामा पारेर पद छाड्न बाध्य पारेपछि बामदेवलाई विकल्पको रुपमा प्रस्तुत गर्ने प्रचण्डको तयारी छ । बामदेवको उमेर पनि ढल्किसकेको र एकपटक प्रधानमन्त्री बन्ने इच्छा भएकोले त्यत्ति इच्छा पूरा गरिदिन ओलीलाई आग्रह गरेर बामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रचण्डको दाउ हो । यसरी बामदेव प्रधानमन्त्री भए भने बामदेव पदमा त रहनेछन् तर हालिमुहाली प्रचण्डकै हुनेछ । प्रधानमन्त्रीबाट आफू अनुकूलका सबै निर्णय गराउन प्रचण्ड सक्षम हुनेछन् । आखिर बामदेव प्रचण्डका गोटी न हुन् ।
मध्याराती गुम्मीमा घट्यो यी २ घटना…
कन्या जाली च्या तिदैमा क रणी नै भन्ने हुदैन: डा. करूणा! (भिडियो सहित)